Fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani oo lagu xiray Somaliland | HalQaran.com
Home Warar Cusub Fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani oo lagu xiray Somaliland
Fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani oo lagu xiray Somaliland
Hargeysa (Halqaran.com) – Warar caawa na soo gaaraya ayaa sheegaya, in Fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani lagu xiray Somaliland, kaddib markii uu maanta gaaray magaalada Berbera.
Fanaan Qamar Suugaani oo muddooyinkii dambe ku sugnaa Caasimadda Muqdisho oo uu bandigyo dhowr ah ku qabtay ayaa safar dhulka ah uga tegay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland, isagoona halkaasi Somaliland uga galay.
Weli wax faah-faahin ah kama aysan bixin laamaha ammaanka Somaliland sababaha ay u xireen Fanaanka Qamar Suugaani.
Somaliland ayaa inta badan xira shaqsiyaadka caanka ah ee u safra magaalada Muqdisho, islamarkaana dib ugu noqda Hargeysa.
Fanaan Qamar Suugaani oo lagu xiray Somaliland